Gịnị ka i kwesịrị ibu n’obi mgbe ị na-amụ Okwu Chineke?
Gịnị mere obi ji sie gị ike na Jehova na-eme ihe ziri ezi mgbe niile?
Mgbe ị na-ekpe ekpere, gịnị mere i ji kwesị ịkpọ okwu aha?
1. Gịnị mere anyị ji kwesị ịgbasi mbọ ike ka anyị na Jehova dị n’ezigbo mma?
Ị̀ BỤ Onyeàmà Jehova e mere baptizim? Ọ bụrụ na ị bụ, i nwere akụ̀ bara ezigbo uru, ya bụ, adịm ná mma gị na Chineke. Ma, ụwa Setan na anụ ahụ́ anyị na-ezughị okè na-agbalị ka anyị na Jehova ghara ịdị ná mma. Ihe a bụ nsogbu cheere Ndị Kraịst niile aka mgba. N’ihi ya, anyị kwesịrị ịgbasi mbọ ike ka anyị na Jehova dị n’ezigbo mma mgbe niile.
2. (a) Olee ihe na-egosi na mmadụ abụọ dị ná mma? (Kwuo ihe e dere n’ala ala peeji.) (b) Olee otú anyị ga-esi mee ka anyị na Jehova dị n’ezigbo mma?
2 Gị na Jehova ùnu dị ná mma n’eziokwu? Ị̀ chọrọ ime ka unu dịkwuo ná mma? Jems 4:8 kwuru otú ị ga-esi eme ya. Ọ sịrị: “Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga-abịarukwa unu nso.” Adịm ná mma ahụ gbasara gị na Jehova. * Ọ bụrụ na i mee ihe i kwesịrị ime iji bịaruo Chineke nso, ọ ga-abịaru gị nso. Ka ị na-eme otú ahụ, ị ga-aghọta na Chineke dị adị, gị na ya adịkwuo ná mma. Ọ ga-adị gị otú ọ dị Jizọs mgbe ọ sịrị, “Onye zitere m dị adị n’ezie . . . Amaara m ya.” (Jọn 7:28, 29) Ma, olee ihe ndị i kwesịrị ime ka gị na Jehova dịkwuo ná mma?
Olee otú gị na Chineke ga-esi na-ekwurịta okwu? (A ga-akọwa ya na paragraf nke 3)
3. Olee otú anyị na Jehova ga-esi na-ekwurịta okwu?
3 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịaru Jehova nso, gị na ya kwesịrị ịna-ekwurịta okwu mgbe niile. Olee otú gị na Chineke ga-esi na-ekwurịta okwu? Ka e were ya na enyi gị bi n’ebe dị anya, olee otú gị na ya ga-esi na-ekwurịta okwu? Unu nwere ike ịna-ederịta akwụkwọ ozi ma na-ekwurịta okwu n’ekwentị ugboro ugboro. Otú ị ga-esi na-agwa Jehova okwu bụ ịna-ekpegara ya ekpere mgbe niile. (Gụọ Abụ Ọma 142:2.) Otú ị ga-esi kwe ka Jehova na-agwa gị okwu bụ ịna-agụ Okwu ya bụ́ Baịbụl mgbe niile ma na-atụgharị uche na ya. (Gụọ Aịzaya 30:20, 21.) Ka anyị tụlee otú ime ihe ndị a ga-esi mee ka anyị na Jehova dịkwuo ná mma, anyị na ya abụrụkwa ezigbo enyi.
JEHOVA NA-AGWA GỊ OKWU MGBE Ị NA-AMỤ BAỊBỤL
4, 5. Olee otú Jehova si agwa gị okwu mgbe ị na-amụ Baịbụl? Nye ihe atụ.
4 O doro anya na i kwetara na ihe dị na Baịbụl bụ ihe Chineke chọrọ ka mmadụ niile mara. Ma, Baịbụl ò kwuru otú gịnwa ga-esi bịaruo Jehova nso? Eenụ. Ka ị na-agụ Baịbụl ma na-amụ ya mgbe niile, mata otú obi dị gị banyere ihe ị na-agụ. Cheekwa otú ị ga-esi mee ihe ị mụtara. I mee otú ahụ, ọ pụtara na ị na-ekwe ka Jehova gwa gị okwu. Ọ ga-abụ ezigbo Enyi gị, gị na ya adịkwuo ná mma.—Hib. 4:12; Jems 1:23-25.
5 Dị ka ihe atụ, gụọ ma tụgharịa uche n’ihe Jizọs kwuru, ya bụ, “Kwụsịnụ ịkpakọbara onwe unu akụ̀ n’ụwa.” Ọ bụrụ na i chere na ị na-agbalịsi ike ibu ụzọ na-achọ Alaeze Chineke, obi gị ga-agwa gị na ị na-eme Jehova obi ụtọ. Ma, ọ bụrụ na ị chọpụta na i kwesịrị iselata aka n’ịchụ akụnụba ma gbakwuo mbọ ka i buru ụzọ na-achọ Alaeze Chineke, ọ pụtara na Jehova emeela ka ị mata ihe i kwesịrị ime ka gị na ya dịkwuo ná mma.—Mat. 6:19, 20.
6, 7. (a) Olee uru ịmụ Baịbụl ga-abara anyị? (b) Gịnị ka anyị kwesịrị ibu n’obi mgbe anyị na-amụ Baịbụl?
6 Ọ bụghị naanị na ịmụ Baịbụl na-eme ka anyị mata àgwà ndị anyị kwesịrị ịgbanwe, ọ na-emekwa ka anyị ghọtakwuo ihe ọma Jehova na-eme nakwa àgwà ya ndị magburu onwe ha. Ihe ndị a na-eme ka anyị hụkwuo ya n’anya. Ọ bụrụ na anyị ahụkwuo Chineke n’anya, ọ ga-ahụkwu anyị n’anya, anyị na ya adịkwuo ná mma.—Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 8:3.
7 Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbịaru Jehova nso, anyị kwesịrị ibu ezi ihe n’obi na-amụ Baịbụl. Jọn 17:3 sịrị: “Iji nweta ndụ ebighị ebi, ọ dị ha mkpa ịmata gị nke ọma, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere, bụ́ Jizọs Kraịst.” N’ihi ya, ihe anyị kwesịrị ibu n’obi na-agụ Baịbụl ekwesịghị ịbụ naanị ka anyị mata ihe ọhụrụ, kama o kwesịrị ịbụ ka anyị ‘matakwuo’ onye Jehova bụ.—Gụọ Ọpụpụ 33:13; Ọma 25:4.
8. (a) Olee ihe ụfọdụ ndị nwere ike iche banyere ihe 2 Ndị Eze 15:1-5 kwuru na Jehova mere Eze Azaraya? (b) Olee otú ịmata Jehova nke ọma ga-esi mee ka anyị ghara ichewe ma ihe o mere ò ziri ezi?
8 Ọ bụrụ na anyị amatakwuo ụdị onye Jehova bụ, anyị agaghị echegbuwe onwe anyị ma ọ bụrụ na Baịbụl ekwughị ihe mere Jehova ji mee ihe ụfọdụ o mere. Dị ka ihe atụ, gịnị ka ị ga-ekwu ma ị gụọ banyere ihe Jehova mere Azaraya bụ́ eze Juda? (2 Eze 15:1-5) Cheta na Azaraya nọ “na-eme ihe ziri ezi n’anya Jehova” n’agbanyeghị na “ndị mmadụ ka nọ na-achụ àjà ma na-esure ihe nsure ọkụ n’ebe ndị dị elu.” Ma Baịbụl kwuru, sị, “Jehova tiri eze ihe otiti, o wee bụrụ onye ekpenta ruo ụbọchị ọ nwụrụ.” N’ihi gịnị? Akwụkwọ Ndị Eze nke Abụọ ahụ agwaghị anyị. Ò kwesịrị inyewe anyị nsogbu n’obi ma ọ bụ mee ka anyị chewe ma Jehova ọ̀ tara Azaraya ahụhụ n’enweghị ihe o mere? Anyị agaghị eche otú ahụ ma ọ bụrụ na anyị mata nke ọma otú Jehova si eme ihe. Anyị ga-amata na Jehova na-adọ mmadụ aka ná ntị “ruo n’ókè kwesịrị ekwesị.” (Jere. 30:11) N’ihi ya, obi ga-esi anyị ike na Jehova mere ihe ziri ezi, ọ bụrụgodị na anyị amaghị ihe mere o ji tie Azaraya ihe otiti.
9. Olee ihe ndị mere ka anyị ghọtakwuo ihe mere Jehova ji mee ka Azaraya bụrụ onye ekpenta?
9 Ma, e nwere ebe ọzọ Baịbụl kọkwuuru anyị gbasara Eze Azaraya. Aha ọzọ a kpọrọ ya bụ Eze Ọzaya. (2 Eze 15:7, 32) Ihe E Mere nke Abụọ 26:3-5, 16-21 kwuru na o mere “ihe ziri ezi n’anya Jehova.” Ma, o kwukwara na obi Ọzaya mechara “dị mpako nke na ọ kpataara onwe ya mbibi.” Mpako mere ka ọ nwaa ịrụ ọrụ naanị ndị nchụàjà kwesịrị ịrụ. Ndị nchụàjà iri asatọ na otu gwara ya na ihe ọ chọrọ ime adịghị mma, gbalịakwa ka ha gbochie ya ime ya. Gịnị ka Ọzaya mere? O mere ihe gosiri na ọ dị mpako. O wesoro ndị nchụàjà ahụ “oké iwe.” Ka a sịkwa ihe mere Jehova ji mee ka ọ bụrụ onye ekpenta.
10. Gịnị mere na anyị ekwesịghị ịchọwa ka a kọwaara anyị ihe mere Jehova ji mee ihe ọ bụla o mere? Olee otú anyị ga-esi mee ka obi sie anyị ike na ihe niile Jehova na-eme ziri ezi?
10 Anyị ekwesịghị ichefu ihe akụkọ a na-akụziri anyị. Ọ bụrụ na a kọrọ akụkọ na Baịbụl, ma e nweghị ebe ọzọ Baịbụl mere ka ihe ụfọdụ gbasara akụkọ ahụ dokwuo anya, gịnị ka ị ga-eme? Ị̀ ga-echewe na ihe Chineke mere adịghị mma? Ka ị̀ ga-aghọta na ihe Baịbụl gwara anyị kwesịrị ime ka obi sie anyị ike na ihe ọ bụla Jehova mere ziri ezi nakwa na ọ bụ ya kwesịrị ịgwa anyị ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi? (Diut. 32:4) Ọ bụrụ na ị na-amatakwu ụdị onye Jehova bụ, ị ga-ahụkwu ya n’anya ma tụkwasịkwuo ya obi. Ị gaghịzi achọwa ka a kọwaara gị ihe mere o ji mee ihe ọ bụla o mere. Ka ị na-amụ Baịbụl ma na-atụgharị uche na ya, ị ga-aghọtakwu na Jehova bụ onye dị adị, gị na ya ana-adịkwu ná mma.—Ọma 77:12, 13.
Ị NA-AGWA JEHOVA OKWU MGBE Ị NA-EKPEGARA YA EKPERE
11-13. Olee otú i si mara na Jehova na-anụ ekpere? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
11 Mgbe anyị na-ekpe ekpere, anyị na-abịaru Jehova nso. Anyị na-eto ya, na-ekele ya ma na-arịọ ya ka o zi anyị ụzọ anyị ga-eso. (Ọma 32:8) Ma, ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na Jehova bụrụ ezigbo enyi, obi kwesịrị isi gị ike na ọ na-aza ekpere.
12 Ụfọdụ ndị chere na naanị uru ekpere bara bụ na ọ na-eme ka obi dị mmadụ mma. Ha na-ekwu na ọ bụrụ na ọ dị anyị ka à zara ekpere anyị, ọ bụ n’ihi na anyị kwupụtara ihe anyị bu n’obi, mata ihe bụ́ nsogbu anyị ma gbalịsie ike ka anyị mee ihe banyere ya. Ọ bụ eziokwu na ihe ndị a so n’uru ekpere bara, olee otú obi ga-esi sie gị ike na Jehova na-anụ ekpere i ji obi gị niile na-ekpe?
13 Chegodị echiche. Tupu Jizọs abịa n’ụwa, ọ hụrụ otú Jehova si zaa ekpere ndị ohu ya. Mgbe ọ bịara n’ụwa, o kpegaara Nna ya nke eluigwe ekpere ugboro ugboro ma gwa ya otú obi dị ya. O nwedịrị mgbe o kpere ekpere n’ogologo abalị niile. (Luk 6:12; 22:40-46) Jizọs ọ̀ gaara eme otú ahụ ma a sị na ọ ma na Jehova anaghị anụ ekpere? Ọ kụzikwaara ndị na-eso ụzọ ya otú ha ga-esi na-ekpe ekpere. Ọ̀ gaara eme otú ahụ ma a sị na o chere na naanị uru ekpere bara bụ na ọ na-eme ka obi dị mmadụ mma? O doro anya na ọ ma na ekpere bụ ụzọ mmadụ ga-esi gwa Jehova okwu. O nwere mgbe Jizọs kwuru, sị: “Nna, ana m ekele gị na ị nụwo olu m. N’eziokwu, amaara m na ị na-anụ olu m mgbe niile.” Obi kwesịkwara isi anyị ike na Jehova bụ “Onye na-anụ ekpere.”—Jọn 11:41, 42; Ọma 65:2.
14, 15. (a) Olee uru ịkpọ okwu aha mgbe anyị na-ekpe ekpere bara? (b) Olee otú ekpere otu nwanna nwaanyị kpere si mee ka ya na Jehova dịkwuo ná mma?
14 O nwere ike ịdị gị mgbe ụfọdụ ka Jehova azaghị ekpere gị. Ma, ọ bụrụ na ị kpọọ okwu aha mgbe ị na-ekpe ekpere, ọ ga-eme ka ị hụ otú Jehova si zaa ekpere gị. Ị ga-aghọtakwu na Jehova bụ onye dị adị. Ọ bụrụ na ị na-agwa Jehova ihe ọ bụla na-echu gị ụra, gị na ya ga na-adịkwu ná mma.
15 Chegodị banyere otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Karo. * Ozi ọma anaghị atọ ya ụtọ n’agbanyeghị na ọ na-agachi ya anya. Ọ sịrị: “Ịga ozi ọma anaghị atọ m ụtọ. N’eziokwu, ọ naghị atọ m ụtọ. Mgbe m lara ezumike nká, otu okenye kwuru na ya nwere olileanya na m ga-abụ ọsụ ụzọ oge niile. O nyedịrị m akwụkwọ m ga-edejupụta. M kpebiri ịsụ ụzọ. Ma, m malitere ikpe ekpere kwa ụbọchị, na-arịọ Jehova ka o mee ka ịga ozi ọma tọwa m ụtọ.” Jehova ọ̀ zara ekpere ya? Ọ sịrị: “Ihe a bụ afọ nke atọ kemgbe m sụwara ụzọ. Ejirila m nwayọọ nwayọọ mụtakwuo otú e si ezi ozi ọma. Ihe nyeere m aka bụ iwepụtakwu oge na-aga ozi ọma na ịmụta ihe n’aka ụmụnna nwaanyị ndị ọzọ. Taa, ọ bụghị naanị na ịga ozi ọma na-amasị m, kama ọ na-atọgbu m atọgbu. Ihe ọzọ bụ na mụ na Jehova adịkwuola ná mma.” O doro anya na ekpere Karo kpere nyeere ya aka ka ya na Jehova dịkwuo ná mma.
16, 17. (a) Gịnị ka anyị kwesịrị ime ka anyị na Jehova dịkwuo ná mma? (b) Olee ihe anyị ga-atụle n’isiokwu na-esonụ?
16 Ime ka anyị na Jehova na-adịkwu ná mma bụ ihe anyị ga na-eme ruo mgbe ebighị ebi. Anyị ga na-agbasi mbọ ike ịbịaru Chineke nso ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ bịaruo anyị nso. N’ihi ya, ka anyị na-agwa Chineke okwu mgbe niile n’ekpere, na-amụkwa Baịbụl n’ihi na ọ bụ otú anyị ga-esi na-ege ya ntị. Anyị mee otú ahụ, anyị na Jehova ga na-adịkwu ná mma. Ọ ga-enyekwara anyị aka imeri ọnwụnwa ndị na-abịara anyị.
Ime ka anyị na Jehova na-adịkwu ná mma bụ ihe anyị ga na-eme ruo mgbe ebighị ebi (A ga-akọwa ya na paragraf nke 16 na 17)
17 Ma, anyị na nsogbu ka nwere ike ịna-alụ n’agbanyeghị na anyị ji obi anyị niile na-ekpe ekpere. Ụdị ihe a nwere ike ime ka anyị ghara ịtụkwasịzi Jehova obi, anyị echewe ma Jehova ọ̀ ka na-anụ ekpere anyị. O nwekwara ike ịdị anyị ka anyị na ya adịghịzi ná mma. Gịnị ka anyị ga-eme ma ụdị ihe a mewe anyị? A ga-aza ajụjụ a n’isiokwu na-esonụ.
^ para. 2 Ihe na-egosi na mmadụ abụọ dị ná mma bụ otú ha abụọ si were ibe ha na otú ha si emeso ibe ha. N’ihi ya, ọ bụ ha abụọ ga-eme ka ha na-adị ná mma.
^ para. 15 Aha a kpọrọ ya abụghị ezigbo aha ya.
mailto:?body=Gị na Jehova Ùnu Dị ná Mma n’Eziokwu?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015285%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gị na Jehova Ùnu Dị ná Mma n’Eziokwu?